कुलमान घिसिङको प्रश्नः डलरमा पीपीए नगर्ने भए के गर्ने ? - नेपाल दृष्टि
हुन सक्छ, भोलि हामीले धेरै पीपीए वैदेशिक लगानीमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । विनिमय जोखिमभन्दा पनि भोलि शोधनान्तरका कुरा आउन सक्छ । आखिर डलर त तिनुपर्छ नि, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ, २/३ हजार मेगावाटको पीपीए गर्दा ।
अहिलेको अवस्थामा जस्तो कोरियनकै लगानीको कुरा गर्नुस् । १० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । १० वर्षसम्म लगानी गरेर बसिराछ । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ?
किनकि खिम्तीमा अहिले रोयल्टी पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ । वर्षभरिको इनर्जी कति आयो र हामीले कति तिर्‍यौं भन्ने हिसावबाट औसत आउँछ । यो हिसाव १२ सेन्ट औसत हो । १२ सेन्ट भनेको करीव १२ रुपैयाँ हो । कुल गर्दा खिम्तीमा १२ रुपैयाँको औसतमा छ ।
फेरि त्यही इनर्जीलाई यता ल्यायो एक्सेसमा पैसा पनि पायो । यहाँ दुईवटा फाइदा भयो । यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिशत त परिवर्तन हुँदैन । सय युनिटमा सय युनिट नै एक्सेस आउनु भनेको त ठूलो कुरा हो ।
यी कुराको ल्याकिङ छ खिम्तीमा । किनकि त्योबेलामा इनर्जीका बारेमा त्यति ज्ञान पनि भएन । विज्ञहरू पनि भएनन् ।
त्यसपछि हामीले धेरै पीपीए गर्‍र्यौं । जस्तै डलरमा इन्द्रावतीको पीपीए भएको छ । अलि महंगै भए पनि यो सानो पीपीए भएकाले त्यसको त्यति ठूलो असर छैन । ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीको पीपीए भयो चाइनीजहरुसँग ।
पीपीए त भयो । तर, मलाई त अझै पनि फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । उसले फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन, म गर्दिनँ भन्न पनि बेर छैन । उसको फाइनान्सियल क्लोजर त गरिदिनुपर्‍यो नि । बैंकले त्यो जोखिम लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्‍यो नि । अनलाइनखबर
Posted in राजनीति, सूचना/प्रविधि
Prevकलाकार तथा निर्माता शाह दर्शन समाज जापानद्वारा सम्मानित
Nextडा. बालकृष्ण थापाः देशले गुमायो एक होनहार न्यूरो सर्जन
भारतको मध्यप्रदेशमा एउटा समुदाय,जसले छोरी जन्मँदा उत्सव मनाउँछ